Ny endrika lehibe indrindra amin'ny bilaogin'orinasa | Martech Zone
Alarobia, Aprily 29, 2009 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Androany alina aho dia nanana fotoana nahafinaritra tamin'ny Confluence, hetsika tambajotra Indianapolis, izay nihaonanay ekipa iray niresaka momba ny Tokony hatao sy tsy tokony hatao amin'ny fanaovana bilaogy orinasa. Nanatevin-daharana ahy ireo matihanina amin'ny indostria namana Rhoda Israelov, Rodger Johnson, Kyle Lacy ary Kevin Hood.
Nisy fahasamihafana kely teo amin'ny fifanarahana momba ny fibaikoana sy ny fibaikoana bilaogy orinasa iray, saingy mino aho fa nifanaraka tanteraka isika rehetra fa ny fanaovana bilaogy, amin'ny maha-mpanelanelana azy, dia lasa tetika izay manan-danja indrindra (ary angamba mahasoa kokoa) noho ny mailaky ny birao. Ireo no teniko - tsy an'ny an'ny tontonana.
Host Erik Deckers nanidy ny resaka tamin'ny fanontaniana iray:
Inona ny torohevitra iray lehibe tokony hotsaroan'ny tsirairay rehefa manomboka ny bilaogin'izy ireo?
Nakatona ny tontonana, nifanaraka tamin'ny hafa aho fa manomboka amin'ny fikarohana teny lakile lehibe, atiny mahafinaritra, manoratra momba ny mpanjifanao, ary mahitsy sy mangarahara. Ny valinteny rehetra dia salan'isa voalohany, noho izany dia nanararaotra nanakatona aho tamin'ny fampahatsiahivana fotsiny ny rehetra fa mila misy hita maso, tsotra lalana mankany amin'ny fiankohofana ao amin'ny bilaogy.
Tsy afaka milaza aminao aho hoe impiry aho mitsidika bilaogy ary liana amin'ny fihaonana amin'ilay bilaogera ao ambadik'izany, na mividy ny vokatra na serivisy aza, saingy tsy misy miharihary ao amin'ilay pejy izay manondro ahy amin'ny lalana marina. Ny bilaogy fandraharahana rehetra dia tokony hanana anarana, endrika fifandraisana, nomeraon-telefaona, adiresy - ary koa antso vitsivitsy natao ho an'ny hetsika izay manome fotoana ahafahana misoratra anarana sy mifandray amin'ny orinasa.
Misy aza ny sasany tsy voamarina fifanakalozan-kevitra amin'ny tranonkala izay angalan'i Google amin'ny tranokala izay misy lisitra ny adiresy paositra ao amin'ny tranokalany. Miaraka amin'ny fahatokisan'ny Google ny fitokisana hatrany, dia misy dikany fa ny tranokala manana adiresy amoron-dalana manan-kery dia mety hatoky mihoatra ny iray raha tsy.
Tags: bilaogyfitorahana bilaogymiantso amin'ny asafiovam-ponyctapejy pejy